FASAL CANAB "LAURA" - VITICULTURE
Waxyaabaha kala duwan ee canab loo yaqaana "Laura" ayaa muddo dheer ka soo jiidatay taageerayaasha badan ee viticulture.
Kooxihiisii ​​quruxda badanaa ee quruxda badan waxaa laga codsanayaa in laga saaro laamaha geedaha isla markiiba isku dayey.
"Laura" waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee canab cows, taas oo inta badan laga heli karo suuqyada iyo makhaayadaha xagaaga.
Bannaanka ugu khibrad badan ayaa ogaanaya noocyada kala duwan ee kale, yar yar, magaca - "Flora".
Waxay ku saabsan tahay noocyada kala duwan ee canabka buunshaha iyo waxaan kuu sheegi doonaa hoosta, oo aynaan iloobin in la wadaago waayo-aragnimada xirfadlayaasha ee beeritaanka iyo beeritaanka canabkiinna.
Waxaan wadaagnaa sirta ugu weyn ee guusha ee kala duwan ee canabka Laura ee beerta
Kala duwanaantan waxaa soo saaray Cilmi-baarayaasha Yukreeniga ee Machadka Odessa, kuwaas oo maamula tan si ay u dhaafaan 4 noocyo kale oo canab ah. Gaar ahaan, markii ugu horeysay ee loo yaqaan "Muscat de Saint-Valle" waxaa lagu xardhay noocyo kala duwan oo manka ah "Muscat of Hamburg" iyo "Husayne", ka dibna natiijada isgoysku waxa kale oo lagu qasi jiray "Queen of Tairovskaya" canab.
Noocyada kala duwan ee rucubyada ee canab quruxda ugu quruxda badan "Laura"
Kareemada Laura Laura waxay si fudud ugu faani kartaa kooxo aad u tiro badan, taas oo waqtiga bacaha laga saari karo gaari karo tiro ugu yaraan hal kilo. Wixii canab, tirooyinkaas aad ayay u sarreeyaan, gaar ahaan marka aad ka fikiraysid ballaaran ee canab-shimbireed-waxay ahayd qiyaastii 2.4 kiilo. Sidaa darteed, dhererka celceliska of farabadan ee canab of noocyo this sidoo kale waa mid cajiib ah - waxay u dhigantaa 40 sentimitir.
Nooca shimbiraha waxaa inta badan lagu arkaa in la xirxiray, iyada oo qaabdhismeed dhexdhexaad ah ama jajab ah oo lagu ridayo berry. Waxaa haboon in la ogaado in isbarbardhigka qaabka dhismaha ee farabadan ee kala duwan ee Lora yihiin aad u badan ku tiirsanaanta koritaanka baadiyaha iyo sida ugu wanaagsan ee pollination of inflorescences canab ah la sameeyey.
Caleemaha canabka ah ee fasalkan waxay u dhigmaan xajmiga xajmiga. Sidaa darteed, Celceliska miisaanka canab "Laura" waa 8-9 garaam. Iyadoo daryeel wanaagsan, berry ayaa xitaa gaari karaa tiro dhan 12 grams. Waxaa lagu gartaa qaab muuqaal ah. Dhererka berrinka wuxuu noqon karaa ilaa 4 sentimitir.
U muuqaalka muuqaalka ah ee berry waa mid aad u qurux badan. Midabkoodu badanaaba caddaan, oo leh midab cagaaran-cagaaran, taas oo ka dhigaysa canab "Laura" amber. Soo-gaadhista sunta waxay keeni kartaa qorax guban dhinac dhinac ah ee berriga. Maqaarka berri wuxuu ku daboolaa lakabka khafiifka ah ee wax dhirta.
Laura "noocyo canbaar ah oo dufan ah" Laura "waxaa lagu gartaa cufnaanta sare iyo casiirnimada, joogitaanka tiro yar oo ah miraha. Dhadhanka noocyada this canabkuna waa mid aad u taajir ah oo wacan, waxay u egtahay midka ugu caansan ee Aasiya Central A, kaas oo lagu soo bandhigay dhadhanka musta.
Guud ahaan, macaanka guud ee sonkorta dabiiciga ah ee ka kooban kiimikada of canab waa mid aad u sarreeya. Sidaa darteed, celcelis ahaan, macaanka sonkorta ee saxarka ee berry canab ah ee kala duwan tani waxay u dhigantaa 20% ee content of kiimikooyinka kale, oo leh acidity ee midhaha at 6-8 g / l. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha sii kordhaya ee canab of kala duwan tani waxay si weyn u saameyn kartaa tayada miraha, tayada si yar u dhadhan.
Isticmaal noocyo canab ah "Laura" inta badan miiska. Aad ayay ugu habboon tahay isticmaalka cusub. Hase yeeshee, waxqabadka waa haboon - Isticmaalidda noocyada kala duwan ee gadaashooda ayaa badanaa isticmaala noocyada kala duwan ee winemaking.
Noocyada kala duwan ee baadiyaha iyo dhalidda canab "Laura"
Bushka canabka "Laura" sida caadiga ah wuxuu si weyn u koraa. Mid ka mid ah baadiyaha wuxuu noqon karaa ilaa 40-50 indhood. Inta lagu jiro muddada fruiting baadiyaha u soo galaa si dhakhso ah ka dib markii beerto ama tallaal - ilaa 2-3 sano. Caleemaha canabku si aad u fiican ayaa loo horumariyaa, intooda badan (oo ku saabsan 60-80%) waxay ku haboon yihiin waxtarka.
Mid ka mid ah biqil, 0.9-1.3 canab guruud ah ayaa la sameeyaa celcelis, taas oo bixisa dhalid aad u sarreeya oo kala duwan.
Kooxuhu waxay ku sameeyaan caleemo indho-furan. Ubaxka canabku waxay leeyihiin haween kaliya oo haween ah, sidaa daraadeed, si ay u helaan beergooyska waa inay noqdaan kuwo la pollinated leh caawinta manka si ka soo noocyo kale oo sabiib ah.
Waxaa haboon in ay fiiro gaar ah u yeelato qaar ka mid ah isfahanka fruiting iyo waqtiga Bisaylkiisa ee rucub canab ah ee kala duwan "Laura". Guud ahaan, tiro badan oo kooxood ah ayaa ka sameysan kara baadiyaha weyn. Si kastaba ha noqotee, marka la kordhiyo tiradooda, miisaankoodu wuxuu yareeyaa. Marka, qiimaha ugu sarreeya ee 40-45 kooxood, miisaankoodu wuxuu noqon karaa 2-3 jeer ka hooseeya celceliska qiimaha, oo noqon karo kalabar kiilo.
Sidaa darteed, inkastoo xaqiiqda ah in inta badan Cinabkani wuxuu ubaahan yahay xilli hore, qiyaastii 110-120 maalmood oo ah xilliga daaqsinka, iyada oo tiro badan oo canab ah iyo muddada ay Bisaylkiisa ay dib u dhacdo. Sidaa darteed, oo leh qiyaasta goosashada la arkay, cirridka laga saari karo ee canabku wuxuu bilaabmayaa oo kaliya dhamaadka canab, iyadoo la socda noocyo dhexdhexaad ah iyo kuwo dambe oo qaangaar ah. Sidoo kale, cawaaqibka ka mid ah hodanka noocaas ah ee rucubooyinku waxay noqon karaan in sanadka soo socda uu baadiyaha u tuuri karo gabi ahaanba ugxan-dhan.
Sidoo kale, badanaa xitaa xitaa duurka weyn, kaliya 15-18 canab ku xiri karaa. Xaaladdan oo kale, qaan-gaarnimadoodu waxay timaadaa bil ka hor sidii caadiga ahayd - bisha Agoosto. Kooxaha noocyadani waxay noqon doonaan kuwo aad u ballaaran, taas oo, mabda 'ahaan, qayb ahaan u qaybin karto qadar yar oo dalagga ah. Si kastaba ha noqotee, sida hoos u dhicin waxay keeni kartaa baadiyaha inay dib ugu soo galaan xilli sii kordhaya ka hor dhamaadka dayrta.
Tani si adag looma ogola. Sidaa darteed, sifooyinka ee samaynta of dhalidda ee noocyada kala duwan waa in la ilaaliyo aad si taxadar leh iyo isku dayaan in ay ilaaliyaan kala duwanaansho ugu wanaagsan ee load ee geedka canabka ah - oo ku saabsan 23-27 canab. Isla mar ahaantaana, waa mid aad u muhiim ah in qiyaastii 30% oo ah caleemo hal, mid aan caleenta lahayn ay joogaan duurka.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee kala duwan ee canab "Laura"
Inkasta oo xajmiga weyn ee canab, khudradda noocan ah ay aad ugu habboon yihiin gaadiidka iyo nolol wakhti dheer ah. Intaa waxaa dheer, berry si dhakhso ah u bislaadaan oo ay leeyihiin dhadhan weyn.
Sidoo kale, ilo fara badan, kala duwanaanta canabka Laura waxaa lagu gartaa sida adag u adkaysta. Tani waxay tixraac ahaan ugu tiirsan tahay caabbinta sare ee canab ee hore ee kalluunka casaanka iyo xaqiiqda ah in berry ay awoodaan in ay u dulqaadan qoyaan sare oo aan si fiican u dillaacin. Waxaa jira iska caabin aad u sareeya ee cudurada fungal, kuwaas oo inta badan laga helo on canabkiinna.
Intaa waxaa dheer, baadiyaha kala duwan ee si fiican u dulqaadanayo xitaa heerkulka aad u hooseeya: waxa ku dhowaad ma saameynayo marka heerkulbeeggu hoos u dhigo calaamadda ah -21-23ºS, inkasta oo tallaabooyinka ilaalinta ay wali u qalmaan qaadashada.
Tayada wanaagsan ee canab "Laura" waa xaqiiqda ah in kooxahaasi ay aad ugu fiican yihiin caleemaha baadiyaha. Sidaa darteed, xitaa leh wax soo saarka badan iyo ka dib markii bilawga ah ee bislaansho ka soo canab of, canab ma crumble.
Dhibaatooyinka canab ee "Laura": miyuu ku haboon yahay inaad dareenka siiso?
Inkasta oo ay jiraan cillado dhawr ah oo kala duwan, waa in aan la iska indhatirin, maadaama ay ku adkaan karaan awood kasta. Sidaas, marar badan waxay dhacdaa in dhadhanka canab ah waa la dhimay, berry ayaa noqda wax ka macaan badan sida caadiga ah. Sababta tani waxay noqon kartaa baadiyaha xooggan ee koraya (iyo gaar ahaan kayd xoog leh iyo ballaadhan, taas oo ah jaritaanka kala duwan ee noocyada Lora ayaa la gooyey), xagaaga qaboobaha iyo roobabka.
Sidaa darteed, waa inaad si joogta ah ula socotaa tirada kooxo isku dhafan oo dhimi kara tirada celceliska la aqbalay. Dhibaatada ugu weyn ee berry waa in ay inta badan saameyn ku yeelan karaan caarada. Sidoo kale, sababtoo ah maadada sare ee sonkorta ee ka kooban, waxay tahay mid aan macquul aheyn in la qiyaaso farabadan "Laura" oo aan lahayn finan.
Waxa aad u baahan tahay si aad u ogaato si aad si fiican u beerto geedo "Laura"
Si canab si ay u koraan oo aad u fiican oo buuxa fruited, waxaa lagama maarmaan ah in ay xisaabta ku xisaabtamaan nuucyada badan. Gaar ahaan:
Ciidda beeritaanka canab "Laura" waxay noqon kartaa mid kasta, marka laga reebo dhoobo iyo walaxda cusbo oo sarreeya. Laguma talin in la beero canab oo dhulkuna ay aad ugu dhow yihiin dhulka dushiisa.
Wixii beereed kala duwan ee caleemaha this waa ka wanaagsan in la doorto meel oo si wanaagsan u iftiimay qorraxda iyo ma la afuufay by drafts.
Lushe canab oo keliya ayaa koraan, oo midho u dhoofaa gobollada koonfurta. Gobollada Bartamaha iyo Waqooyiga waxaa ugu wanaagsan inay ku beertaan derbiga ama deyrarka, si ay u iftiinka qorraxda badan ee suurtogalka ah u dhaco.
Goorma iyo sida ugu fiican ee loo beeray baadiyaha sabiib ah?
Waqtiga ugu wanaagsan ee canab beerto ee Koonfurta waa muddada laga bilaabo Oktoobar ilaa Maarso. Gobolada qaboobaha, geedo canab gurida ama gooyn dhirta ugu fiican guga. Waa mid aad u muhiim ah in xilliga beeritaanka heerkulka hawadu uusan ka yarayn + 15ºS, iyo heerkulka ciidda wuxuu ku saabsan yahay + 10ºS.
Beerta canabkana waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo sabuub, ama adoo gooyey jarjarida dusha sare. In kasta oo xaqiiqda ah in beeritaanka by geedo loo tixgeliyo inuu noqdo mid fudud oo hufan, thanks thanks, waxa aad ka heli kartaa dhalidda ugu horeysay si dhakhso ah. Tan waxaa lagu sharaxay xaqiiqda ah in marka la gooyo jarida kaydka qof weyn oo leh nidaam asal ah oo horay loo sameeyay, waxay awood u leedahay in ay helaan nafaqooyin badan oo badan oo horumarinaaya si dhakhso ah.
Canab dhirta "Laura" sapling - tilmaamaha muhiimka ah
Wixii canab beerto isticmaalaya geedo waa muhiim in la diyaariyo dalool hore. Its qoto dheer waa in ay ahaataa laba jeer size ee xididdada ee seedling, sidaas darteed xitaa bacrimin ku daadi karaa hooseysa. Waa wax aan suurtogal ahayn in la buuxiyo Bacriminta sidan, waxa fiican in laysku daro lakabka sare ee bacriminta qoyan ee qoday isla qodaa.
Masaafada u dhexaysa geedo waa in aysan ka yareyn 1-1.5 mitir. Laga soo bilaabo taageerada ama derbiga waxaad u baahan tahay inaad ku noqoto 40 sentimitir. Haddii seedling waxaa loo beeray si xor ah, ka dibna masaafada u dhexeysa duurka iyo saf ee duurka waa inay ahaadaan ugu yaraan 1.5 mitir.
Geedi sabir ah ayaa lagu beeray dusha sare ee buurta oo buuxsamay Bacriminta, kadib laba ama saddex toddobaad. Waa mid aad u muhiim ah in goobta qafiska ee seedling ay ka sarreeyaan ciidda 10 sintimitir. Waxaa lagama maarmaan ah in ay si tartiib ah u buuxiyaan safka oo si tartiib tartiib ah, si taxadar leh u buuxinta ceelka ciidda lagu qaso Bacriminta macdanta.
Ka dib marka ceelku hurdo, waa muhiim in la xoojiyo ciidda iyo in la dhiso taageero adag oo u dhow godka (canabku waa geed aan korneeyn karin, iyada oo aan taageero laga helaynin dhulka). Ka dib markii la waraabiyo, canab waa in la waraabiyaa, iyo ciidda ku wareegsan seedling waa mulched.
Geedka loo yaqaan 'Laura Fruit by Grafting
Haddii aad ku jirto goobtaada waxaa jira horey jir ah oo ah canab oo aad horayba u daadisay, waxaad ku kari kartaa "Laura" noocyada kala duwan. Tani waa arrin aad u muhiim ah:
Diyaarso oo iska xejiso goynta horay si aad u xasiloonaato. Sidoo kale, si aad si fiican u kiciso rooting ka hor inta aan la jarin, waa muhiim inaad ku qabato biyaha oo ku darso dhawr ilbiriqsi oo ah "Humate".
Booggu wuxuu u baahan yahay in la gooyo jeexjeexo si uu u dhigo ka soo horjeedka jirridda si ka fiican.
Sidaa darteed, shtamb ee baadiyaha jir waa in si taxadar leh u kala jajaban, sidaas darteed kaliya jarida ku habboon tahay (dhowr gooyn ayaa la iskudhin karaa mid).
Ka dhigista asliga ah ee kala-soocidda ee asliga ah, waa in si fiican loo xiro si ay asaas u yeeshaan si dhakhso ah oo fiican. Sidaa awgeed, waxaa lagu adkeeyaa dharka suufka ah. Haddii
kaabashada waxaa loo fuliyaa jiilaalka, ka dibna seedling waa in la daboolaa dhoobo iyo okulirovat isticmaalaya ciidda.
Baro xeerarka asaasiga ah ee daryeelka canab "Laura"
Waraabinta geedka canabka ah wuxuu u baahan yahay joogto ah iyo joogto ah. Gaar ahaan waxay dalbanayaan in lagu waraabiyo duurka kuwaas oo lagu dhex beeray derbiga. Si loo fuliyo waraabinta waxaa ku jira grooves dheecaan khaas ah oo lagu qoday dhexroorka nidaamka xididka duurka. Ka waraabinta shtamb waa khatar gaar ah, tan iyo xididdada ku dhow agagaarku ma awoodaan in ay nuugaan biyaha. Qadarka biyaha ee loo baahan yahay baadiyaha sabirta da'doodu yartahay waa 30 litir, marka loo eego qof weyn iyo marka fruiting - qiyaastii 60 litir.
Si aad u ilaaliso qoyaanka ee ciidda dheer iyo runtii quudiyo xididdada geedka canabka ah, aad ayay muhiim u tahay in la gooyo. Si taas loo sameeyo, isticmaal bacriminta organic, kaas oo sidoo kale bacrimiya ciidda. Layer compost compost loo baahan yahay in ay soo saaraan ugu yaraan 3 sentimitir. Mulching waxaa sida ugu wanaagsan loo sameeyey kaliya dayrta oo keliya guga. Xilliga xagaaga, mulching waxay uumi kartaa ciidda iyo xididdada canab.
Sax ah qabashada baadiyaha canabka ah waxay ka caawinaysaa inay ka ilaaliso saameynta cimilada xun. Dhalinyaro, geedo la beeray oo keliya ayaa si buuxda loogu dabooli karaa ciidda, sidaas darteed labadaba waxay ka badbaadinayaan qaboobaha iyo jiirka. Dhirta ugu weyn waxaa lagu xanaaneeyey mulching iyo hay ".
Sannadaha ugu horeeya ka dib markaad degto "Laura" lama fulin. Hase yeeshe, si wadajir ah oo ay u soo galaan xilliga firaaqada, waa muhiim inaad geedi socodkan si joogto ah u fuliso dayrta. Waa lagama maarmaan in la hormariyo si loo siiyo seddex ama afar afar geesood oo waaweyn, taas oo ugu dambeyntii ka dhalan karto qaro. Xagaaga oo dhan waa mid aad u muhiim ah in la jiido dhammaan caleemaha yar yar si aysan u qaboojin jiilaalka. Sidoo kale, waxaa lagama maarmaan ah in si buuxda looga saaro caleemaha of baadiyaha sabiib ah, kaas oo la qalajiyey oo aan si buuxda u midho u dhali. Si aad u xoog badan u jar canab "Laura" ma awoodi karo, sababtoo ah waxaad gabi ahaanba joojin kartaa kobcintooda. Ka tegida caleemo badan ayaa sidoo kale aan u qalmin, ma dhicin in la sameeyo qaab-dhismeedka xad-dhaafka ah ee dalagyada, tayada canabku hoos u dhigi doono iyo xitaa laga baabi'in karaa hal sano.
Quudinta canab "Laura" waa inay si joogto ah u noqotaalaakiin maaha mid ballaadhan. Wuxuu si fiican uga jawaabaa bacriminta. Waxaa fiican in la isticmaalo Bacriminta macdanta ee caalamiga ah, taas oo si ballaaran u saameyn karta koritaanka baadiyaha iyo canabka. Si loo magdhabo maqnaashaha magnesium, waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo baadiyaha leh magnesium sulfate oo ah qiyaasta 250 garaam oo walaxda ah 10 litir oo biyo ah.
Tan iyo markii ugu badan Laura canabkuu ku dhacaa qaniinyada yar-yar, marka calaamadaha guul darradu ka muuqdaan, cayayaanku waa u qalantaa. geeddi-socodka biyo-qabad. Sidoo kale, duurka qabow, gaar ahaan da'da weyn, waxaa laga yaabaa in ay saameeyaan koritaanka dayrta. Xaaladdan, ka baxdo baadiyaha ma u qalantaa. Waxaa lagu talinayaa in la qodo oo la gubo. Carrabku waa in sidoo kale la nadiifiyo, haddii kale guuldarada ayaa soo noqon doonta.